That's so good, right?: Land of Cherry (Ending)
Land of Cherry (Ending)
'အရုပ်လေးတွေက တကယ်အသက်ဝင်တာပဲနော် မျက်နှာမှာ ခံစားချက်ကိုပေါ်အောင် ဖော်ပြနိုင်တယ်'
'ဟုတ်တယ် ဒါလေးက လမင်းကိုငေးနေတဲ့သူ'
'ငါတော့ နိုဘုကို အခိယာမရဲ့ လှိုင်းပုတ်သံဆိုတဲ့ အရုပ်လေးကို သဘောအကျဆုံးပဲသိလား တကယ့်လှိုင်းပုတ်သံကို နားစွင့်နေတဲ့မျက်နှာပေးလေးနဲ့'
'အီရှု (isho) လူရုပ်လေးတွေက ခေတ်အဆက်ဆက် အ၀တ်အစားလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရုပ်သက်သက်မဟုတ်ဘူး သမိုင်း ကြောင်းတွေကိုပြောပြနေသလိုပဲနော်'
'ကဲ.....သူငယ်ချင်း ကိုယ်လိုက်ပြတာကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ဆူရှီလိုက်ကျွေး'
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Hitoshi'ကတော့ စံပါပဲ။ အကူအညီလည်း တကယ်ပေးစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာ၊ အပြင် ထွက်လည်ရာမှာ တတွဲတွဲနှင့်ပါ။ သူငယ်ချင်း ဂျပန်ကောင်မလေးတွေနှင့်တောင် ဒီလောက်မတွဲဖြစ်ပါဘူး။ Hitoshi' ရည်းစား 'Koji'က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ထားသူဆိုတော့ ရက်ခြားလောက်သာ Hitoshi'ကို လာလာတွေ့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ့အခါမှသာ ကျွန်တော်တို့ ခွဲနေဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။
ဒီနေ့ အတန်းချိန်စောပြီးသလို ဘယ်မှလည်းမသွားချင်တာကြောင့် ဂျပန်သူငယ်ချင်းမလေး'Ryoko' နှင့် စကားစမြည်ပြော သူ့ကို ဘူတာရုံလိုက်ပို့ကာ အဆောင်ကိုပဲပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Hitoshi' ကတော့ အစောကြီးကတည်း အတန်းထဲက လစ်သွားတာ။ ဒီကောင် သူ့ဘဲနှင့်သွားတွေ့သလားမသိ။
ကျွန်တော့်အခန်းသို့ရောက်သောအခါ စကားပြောသံများထူးဆန်းစွာ ကြားနေရသောကြောင့် သော့ကိုအသာဖွင့်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးဝင်ကာ နံရံအကွယ်မှ အသာချောင်းကြည့်လိုက်ပါသည်။ Hitoshi'နှင့် အတန်းထဲက အမေရိကန်သူငယ်ချင်း ၀ီလီယံတို့ တီဗီရှေ့ကဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတာ။ အစက အသံပြုပြီး ၀င်သွားမလို့လုပ်ပြီးမှ သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိကြတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ခြင်း ထိကပ်ထားကြတာကို သတိမူမိသောကြောင့် အသာငြိမ်ပြီး ချောင်းကြည့်ဖြစ်တော့တာပေါ့။
ကြည့်ရတာကတော့ ၀ီလီယံက Hitoshi' ငပဲကို ပြုစုပေးပြီးဖြစ်ပုံရသည်။ သူ့ပါးစပ်မှ အရည်တွေကို တစ်ရှူးနှင့် သုတ်ပစ်နေသည်။ Hitoshi'မျက်နှာက ကျေနပ်ပြုံးပြုံးလျက်။ ၀ီလီယံက ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ Hitoshi'လက်တွေကတော့ ၀ီလီယံတင်ပါးတွေကို ကိုင်ပြီးပွတ်သပ်နေရာက နေရာပြောင်းကာ ကြီးထွားရှည်လျားတဲ့ ဒစ်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ည္ဓစ်တော့သည်။ ၀ီလီယံ ၏ -ီးကြီးသည် အရှည် ၇လက်မကျော်လောက်သည်။ ပြီးတော့ လုံးပတ်မှာလည်း အတော်တုတ်ကာ ထိပ်ဝ ဒစ်မှာ ပို၍ကြီးသည်။ ၀ီလီယံ က Hitoshi' နှုတ်ခမ်းကို နမ်းစုပ်နေရာကနေ လည်တိုင်...ပြီးတော့ ဗိုက်သားတွေဆီ..။
ခဏနေတော့ Hitoshi'ကိုယ်လေးကို အသာချီမက ခုတင်ပေါ်သို့ မှောက်လျက်တင်လိုက်ပါတယ်။ မို့မို့ဖောင်းဖောင်း အားရဖွယ် Hitoshi'တင်သားတွေကို မြင်ရပြီးချိန်မှာတော့ ၀ီလီယံမျက်ဝန်းတွေ ပိုမိုတောက်ပြောင်လာကာ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ တင်သားတွေကို ဆုပ်ညှစ်နေသည်။ အားရကျေနပ်သွားတော့ တင်သားလေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် အသာဖြဲ လျှာကိုအရှည်ကြီးထုတ်ကာ Hitoshi' ခရေ၀ အား ကလိတော့သည်။ လျှာကို အထက်အောက်ရွေ့လျားလိုက်၊ မာတောင်အောင်တောင့်ထားလျက် ဖိသွင်းလိုက်လုပ်နေသည်မှာ Hitoshi' နိဗ္ဗာန်ရောက်နေဟန် 'တအိအိ....တအင်းအင်း'ဖြစ်နေလေသည်။
ရုတ်တရက် ၀ီလီယံထရပ်လိုက်ကာ သူ့ဒစ်မှာ ကွန်ဒွန်ကိုစွပ် ချောဆီရွှဲရွှဲသုတ်ကာ Hitoshi' ခရေ၀ထဲသို့ တစ်ရစ်ခြင်း ဖိသွင်းလေတော့ သည်။ Hitoshi'မှာ ပါးစပ်ကိုဟကာ ငြိမ်နေပြီး ၀ီလီယံရဲ့ ဒစ်ကြီးအဆုံးထိဝင်တာကို ငံ့လင့်နေသည်။ ၀ီလီယံက Hitoshi'ပခုံးတွေပေါ် လှမ်းကိုင်လိုက်ကာ နောက်မှ တစ်ချက်ခြင်းမှန်မှန် ဆောင့်ပေးနေတာ တကယ့်ဖီးလ်ပဲထင်ရဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ Hitoshi'၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းဖက်ကာ အားရှိပါးရှိ အဆက်မပြတ် ဆောင့် -ိုးလိုက်ရာ 'ပတ်...ပတ်...ဘွတ်...ဘွတ်' ဟူသော အသံများပင်ကောင်းစွာကြား နေရပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာ အသက်ပင်ပြင်းပြင်း မရှူနိုင်ပေ။ မြင်ကွင်း၏ သွေးဆောင်မှုကြောင့် ကျွန်တော့်ညီဘွားမှာ အတင်းခေါင်းထောင် ထလာ တော့သည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ၀ီလီယံနေရာမှာဝင်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိ -ိုးချင်စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်လာပါတော့သည်။ အစတော့ ၀ီလီယံမှာ ပုံမှန်လုပ်နေရာကနေ အားမလိုအားမရဟန် ပုံစံအနေအထားပြောင်းချင်ဟန် ဖြင့် ထရပ်လိုက်ရာ Hitoshi' ခရေ၀မှချွတ်ပြီး သူ့-ီး ကြီးမှာ အမြှောက်ကြီးအလားပင်။
၀ီလီယံတကယ်သန်တာပါပဲ။ Hitoshi'ကို ချီပြီး ပက်လက်လှန်လိုက်တာ မြှောက်ကနဲပဲ။ Hitoshi'ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပခုံးပေါ် တင်လိုက်တာကြောင့် ပွင့်အာလာသော ခရေ၀တွင်းသို့ သူ့-ီးကြီးကို လျောကနဲသွင်းလိုက်တာ Hitoshi'ခမျာ အင့်ကနဲတောင် အသံ ထွက်တယ်။ ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကိုင်ကာ အားရပါးရဆောင့်နေသော ၀ီလီယံ၏ မျက်နှာမှာ အခုမှ အားရသည့်ဟန် ပေါ်လာတော့သည်။ မှန်မှန်ဆောင့်လိုက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုက် သူ့ခါးကိုဇကောဝိုင်းရင်း ဆောင့်လိုက်ဖြင့် -ိုးနေရာ Hitoshi'မှာ ဖီးလ်အတော်မြင့်နေဟန် မျက်နှာက။ ထွားကြိုင်းသော -ီးကြီး ခရေ၀မှာ အ၀င်အထွက်ပြုနေသော မြင်ကွင်းကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရတာ ကျွန်တော့်စိတ်မှာ မထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင် ဂျင်းဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုကာ ကလိနေမိတော့သည်။
အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ နှစ်ဦးသားနွှဲနေကြတုန်းပါပဲ။ သူတို့နှစ်ဦးကာမအထွဋ်အထိပ်ရောက်ခါနီးတွင် Hitoshi က ၀ီလီယံပေါ်သို့ တက်ခွကာ ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျဆောင့်တော့သည်။ ၀ီလီယံကလည်း အောက်မှနေ၍ ကော့ကာ ကော့ကာ ညှောင့်ပေးလိုက်သည်။ မကြာမီအချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ သူတို့နှဏ်ယောက် ငြိမ်သွားကြပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့မမြင်နိုင်အောင် ခပ်သုတ်သုတ် အခန်းထဲမှထွက်ခဲ့ပါတော့သည်။
အဆောင်အပြင်သို့ရောက်သောအခါ လေအေးအေးကလေး ထိတွေ့လိုက်သောကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးလန်းဆန်းသလိုရှိသော်လည်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ထကြွသောင်းကျန်းနေသော ရာဂစိတ်များကြောင့် မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းရပါ့မလဲလို့ စဉ်းစားရင်း ရင်ထဲမှာလည်း ချီတုံချတုံဖြစ်နေရသည်။ နောက်ဆုံး၌ မြန်မာပြည်မှာမှ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံခြားတွင် နိုင်ငံခြားသားများက ကျွန်တော့်ကို ချောင်းမြောင်းအတင်းပြောမည့်သူမရှိဟု ကိုယ့်စိတ်ကိုတင်းကာ တက္ကဆီတစ်စင်းဖြင့် လူစည်ကားရာ မြို့လယ်သို့ ထွက်လာမိပါတော့သည်။ နေ၀င်ဆည်းဆာအချိန်ရောက်နေပြီမို့ တစ်မြို့လုံးရောင်စုံမီးမျး တထိန်ထိန်လင်းနေသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ သက်သာရာ သက်သာကြောင်း ဟိုသည်လျှောက်လည်လိုက်တာ ကပွဲရုံများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ဟိုတယ်များ၊ စတိုးပြခန်း များကို ဖြတ်ကျော်လာပြီးနောက် နာမည်ကျော် 'နာကာမူရား' မြစ်နားသို့ရောက်လာပါတော့သည်။
ခုံတန်းလျားအလွတ်တစ်ခုမှာ ခေတ္တအနားယူရင်း ထိုင်နေဖြစ်ပါသည်။ နေ၀င်ဆည်းဆာရောင်ခြည်များမှာ မြစ်အတွင်းရေပြင်ပေါ်၌ ဖြာကျ နေပုံများကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ကြည်နူးနှစ်သိမ့်မိပါ၏။ စိတ်ထဲအနည်းငယ်ငြိမ်သွားမိရရင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းကြည့်မိ သောအခါ မိသားစုများ၊ သမီးရည်းစားစုံတွဲများ၊ အဖိုးအို အဖွားအိုများ စသည်ဖြင့် လေညှင်းခံလမ်းလျှောက်နေကြသည်ကိုမြင်ရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော မြင်ကွင်းများကို ငေးမိရရင်း တဖက်သို့လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်သောအခါ လှပသော အဆောက်အဦးကြီးများ၊ ဟိုတယ် ကြီးများကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ အဆောက်အဦးကြီးများထဲမှ လှပခမ်းနားသော ဘေးအစွန်ကျသော အထပ်မြင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီး တစ်လုံး ကို နီယွန်မီးရောင်စုံဖြင့်တွေ့ရသည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် နီယွန်မီးလုံးများဖြင့် ပုံဖော်ထားသော ဟိုတယ်နာမည်က 'Land of Cherry' တဲ့လေ။ ဒီနာမည်ကို နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရွတ်ကြည့်မိတော့ ကြားဖူးသလိုပဲ စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ 'Koji' ပြောလေ့ရှိသော ဟိုတယ်ဆိုတာ မှတ်မိရပါသည်။
တိုကျိုမြို့တော်သည် လူမျိုးစုံဝင်ထွက်သွားလာနေကြသော စည်ကားသောမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည့်အလျောက် တည်းခိုအနားယူရာ ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများအပြင် နိုင်ငံခြားသားများဆီက ငွေကိုသဲ့ယူတတ်သော ညကလပ်များ ဟိုတယ်များလည်းရှိပေသည်။ ထိုအထဲတွင် 'Land of Cherry' လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်တော့သည်။ ဒီဟိုတယ်မှာ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ကြိုက်ရာလူလာ၊ ကြိုက်တဲ့သူနှင့် ကိုယ့်လိုဘကို ဖြည့်စွမ်းဖို့အဆင်ပြေသည်။ အစားအသောက်များ ကောင်းကောင်းရသည်။၊ အခန်းသန့်ရှင်းသည်၊ ဈေးနှုန်းကြီးသည် စသည်ဖြင့် ပြောစကားများကိုကြားယောင်လာမိသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်၏ လောလောဆယ်ပြဿနာကို ဤဟိုတယ်ကြီး၌ ဖြေရှင်းမည်။ ဒီကိစ္စကိုလည်း မည်သူမျှသိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အားတင်းရသေးသည်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်လူပျိုဘ၀ကို ဒီနေရာမှာ စွန့်လွှတ်ရမည်လား ၀မ်းနည်းရသေးသည်။ ဒါပေမဲ့ အခု 'Land of Cherry' ရဲ့ လှေကားထစ်များဆီရောက်ရှိနေပါပြီ။
Reception ကိုရောက်တော့ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကို စုံစမ်းမေးမြန်းရာ သူက ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးသည်။ ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များ ကို ကြည့် လိုက်ရာ G-String မှလွဲ၍ တစ်ကိုယ်လုံးတုံးလုံးချည်းသာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း ၁၅ပုံလောက် ရွေးချယ်မိကာ နောက်ဆုံးမှ နံပါတ် ၁၂ကိုရွေးလိုက်မိသည်။ အချိုးအဆစ်ပြေပျစ်ပြီး အပြုံးလှလှပိုင်ရှင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပါ။ တစ်ညအတွက် ဂျပန် ယန်းငွေတွေကို ပိုက်ဆံအိပ်မှ ထုတ်ရှင်းပြီးသကာလ ၀န်ထမ်းက ကျွန်တော့်ကို အကဲခတ်သလိုကြည့်ရင်း အခန်းနံပါတ် ၁၂သော့ကို လက်ထဲသို့ကမ်း ပေးလိုက်ပါသည်။ ဓာတ်လှေကားရှိရာကို ခပ်သွက်သွက်လှမ်းကာ ဟိုတယ်အပေါ်ထပ်သို့ အမြန်လှမ်းခဲ့ပါတော့သည်။
တံခါးကို အသာဖွင့်ရင်း အသံပြုလိုက်တော့ 'အထဲကိုဝင်ခဲ့ပါခင်ဗျာ၊ ဒီမှာလာထိုင်ပါ 'လို့ဆိုသော အသံတစ်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။ ၀ီလီယံနှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Hitoshi'တို့၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကစားပွဲကို အနီးကပ်မြင်ခဲ့ရသည့်အတွက် အလွန်ထကြွသောင်းကျန်း နေသော ကျွန်တော့်၏စိတ်သည် လက်တွေ့အဖျော်ဖြေခံမည့်လူလည်းတွေ့ရရော ကြောက်ရွံ့သလိုလို ရင်ထဲပုဇွန်စိတ်တွေခုန်နေ သလိုဖြစ်ကာ အခန်းဝမှာ ရပ်နေမိပါသည်။
သူက 'ကျွန်တော့်နာမည် 'KIRA' ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကညီလေးအလိုရှိသလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်' ဟုပြောကာ သူ၏ ဦးခေါင်း ကိုညွှတ်ကာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုလေသည်။ 'KIRA'ကိုကျွန်တော်အကဲခတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ အသက်၃၀၀န်းကျင် အသား ဖြူဖြူ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် ယောက်ျားဆန်သော ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူဟာ အင်္ဂလိပ်စကား ကို ရေလည်အောင် ပြောတတ်နေတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အတော်အဆင်ပြေပါသည်။
'ကျွန်တော့်နာမည်က ပီတာပါ ဒီမှာ ခေတ္တခဏလာနေတဲ့ ဧည့်သည်ပါ' ဟုကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့ 'KIRA' က ပြုံးနေပါသည်။ သူ့ကိုမြင်ရသည်မှာ ရည်မွန်ပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဖျတ်လတ်၍ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်နေပါသည်။ အခန်းထဲ၌ ခေတ္တခဏ အနားယူရင်း စကားစမြည်ပြောကြပြီးနောက် ရေချိုးရန် ရေချိုးခန်းသို့ ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ အခန်း၏ တန်ဆာဆင်မှု များမှာ သပ်ရပ်လှပစွာရှိပြီး ဤအခန်းတွင်း၌ပင် လိုလေသေးမရှိအောင် အပြည့်အစုံထားရှိလေသည်။ ညအိပ်ဝတ်အင်္ကျီ၊ မျက်နှာသုတ် ပ၀ါ၊အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်း၊ ကုတင်နှင့် ထူထဲလှပသော မွှေ့ယာများ၊ အရက်ပုလင်းမျိုးစုံ အစားအစာအပြည့်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာစသည်ဖြင့် ပြည့်စုံလှလေသည်။ အခန်းတွင်းရောက်နေသော ဧည့်သည်အနေဖြင့် အပြင်သို့မထွက်ဘဲ အလိုရှိတာကိုရနိုင်ပေသည်။ ကျွန်တော် ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် ရေချိုးပြီးသောအခါ နည်းနည်းပါးပါး ရှိုင်း၍ ည၀တ်အင်္ကျီဝတ်ပြီးနောက် အပြင်ခန်းသို့ထွက်လာသောအခါ 'KIRA' ကိုတွေ့ရလျှင် ရှက်သွားသလိုခံစားရမိပါသည်။ ဖန်ခွက်လှလှလေးများထဲ ၀ီစကီများကို အသင့်စပ်ထားကာ ထည့်ထားတဲ့ စားပွဲဘေးမှာ 'KIRA' ကို G-String လေးမှလွဲ၍ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ထားသည်ကို မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ထူးဆန်းနေသော်လည်း သူ့အနေနှင့်မူ လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်မိပါသည်။ သူ့အနား ခပ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားလိုက်တော့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော အရက်ဖန်ခွက်နှစ်ခုကို ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ကိုတစ်ခွက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီး သူကတစ်ခွက်ကို ကိုင်ကာ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူသောက်ကြ၏ အစားအသောက်စားလိုက အဆင်သင့်ရှိကြောင်းပြောသော်လည်း ကျွန်တော့်မှာ အစာမစားလိုတော့ပေ။ ၀ီစကီနည်းနည်းသောက်ပြီးသောအခါ တစ်ကိုယ်လုံးပူနွေးလာပြီး စိတ်ထဲရဲတင်းလာသလိုပင်။ ထို အချိန်ဝယ် 'KIRA' က ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်လာပြီး မထိတထိကလိနေပါသည်။ မွှေးပျံ့ပျံ့ကိုယ်သင်းနံ့ကို သူ့ဆီမှ ရနေသလို အခန်း တွင်း၌ သူနှင့်ကျွန်တော်သာရှိသောကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ပိုမိုရဲတင်းလာမိသည်။
သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ပခုံးထက် အသာကိုင်လိုက်ပြီး ရယ်လိုက်လျှင် ပေါ်လွင်သော ပါးချိုင့်လေးတွေ၊ ပါးပြင်အနှံ့ ၊ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို တက်မက်စွာ နမ်းပါတော့သည်။ ခုတင်ဆီ ငြင်ငြင်သာသာ ပွေ့ဖက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော့် ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်များကို အသာအယာဖယ်ရှာပေးတော့သည်။ အ၀တ်မရှိတော့သော ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးအား သူ့နှုတ်ခမ်း အစုံဖြင့် နမ်းရှုံ့သည်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ မရိုးမရွဖြင့် အားမလို အားမရဖြစ်လာရသည်။
စိတ်ထဲဝယ် ဘာမှရှက်စရာမလိုဟူသောစိတ်ဖြစ်လာပြီးနောက် သူ့ G-String အားဆွဲချွတ်ကြည့်မိသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တင်း သန်မာသလို -ီးကြီးမှာလည်း သန်မာထွားကြိုင်းလှပါသည်။ ၀ီလီယံကဲ့သို့ -ီးမရှည်သော်လည်းလုံးပတ်မှာ ပိုမိုကြီးထွားသည်။ -ီးအရင်း၌ အမွှေးများက မဲနေသော်လည်း -ီးတစ်ချောင်းလုံးမှာ ပန်းရောင်သန်းနေပါတော့သည်။ လက်နှင့်အသာကိုင်ကြည့်ရင်းစိတ်ထဲမှာ ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်မျိုချင်စိတ်ဖြစ်လာသောကြောင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအတွင်းထည့်ကာ ငုံလိုက်၏။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာငုံရင်း တပြွတ် ပြွတ်စုပ်မိတော့ 'KIRA' တစ်ယောက် သဘောတကျ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ပေးရင်း သူ့တင်ပါးတွေကို လှုပ်ရှားကာ ပါးစပ်ထဲ ကော့ကော့ထိုးပေးလေသည်။
အားရကျေနပ်လာသည်အထိ စုပ်မိသည့်တိုင် သူကမပြီးသေးသောကြောင့် ကျွန်တော်ဆက်မစုပ်သေးပဲ ခုတင်ပေါ်လှဲလိုက်သောအခါ သူက ကျွန်တော့်ငပဲကိုအသာကိုင်ရင်း ဆွပေးလေသည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း အချဉ်မဟုတ် လက်တွေ့မလုပ်ဖူးပေမယ့် အမြင်အကြား များစွာရှိသည့်အတိုင်း အလိုက်သင့်လှုပ်ရှားတတ်သည်။ ကျွန်တော့်ညီဘွား ဒုံးပျံကြီးလိုထွားလာတော့ 'KIRA' မျက်လုံးဝိုင်းပြီး သဘောကျ ကာ ခေါင်းကိုငုံ့ သူ့ပါးစပ်ပူပူနွေးနွေးထဲ သွပ်သွင်းလိုက်လေသည်။ အို ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိ သူစုပ်မျိုပုံမှာ တစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေ ဆူပွက်သွားရသလားမသိ။ မရှင်းပြတတ်အောင် သူကျွမ်းကျင်လှသည်။ သွားတွေဖြင့်မထိစေဘဲ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေဖြင့် ရစ်ဝိုက် ပြုစုသည်မို့။ သူ့လက်ချောင်းတွေကလည်း ကျွန်တော့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိနေသေးသည်လေ။
ဒီလိုသာဆို လူပျိုစစ်သေးသော ကျွန်တော့်အဖို့ ဆုံးခန်းတိုင်သွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ရပ်လိုက်ဖို့ပြောရင်း ကျွန်တော်သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို ဆွဲဖက်ကာ မွေ့ယာပေါ်လှဲစေလိုက်သည်။ နောက်သူ့တင်ပါးတွေကို ကိုင်ကြည့်ကာ ဖျစ်ညှစ်ကြည့်လိုက်တော့ သူက အလိုက်သင့် မှောက်ပေးတော့သည်။ တင်သားတွေကို ကိုင်ရသည်မှာ အိအိထွေးထွေးရှိလှသည်။ သူ့ခရေ၀ကို လက်ခလယ်ဖြင့် အသာစမ်းကြည့်မိ သောအခါဝယ် ကျွန်တော့်ညီဘွားက သူ့အစာကို သိသည့်အလား ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်။ 'KIRA' မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ ဆက်လုပ်တဲ့။ ခုတင်ဘေး စားပွဲပုလေးပေါ်က ကွန်ဒွန်တစ်ခုကို ယူစွပ်ကာ ချောဆီနည်းနည်းလူးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် 'KIRA' ခရေ၀ကို အသာတေ့ကာ ခပ်ဖြေးဖြေး ထိုးသွင်းလိုက်တာ ရင်ထဲ ဘယ်လိုအရသာမှန်းမသိ ခံစားရသည်။ ၀င်သွားသည်လား မ၀င်သည်လား ငုံ့ ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့် -ီးတံကြီးမှာ သူ့ခရေ၀တွင်မက အတွင်းထဲသို့တစ်ဝက်ကျော်ကျော် နစ်မြုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ပေါ့။
ကျွန်တော်ခပ်ဖြေးဖြေး ကလေးပြန်ချွတ်လိုက်ကာ ဒစ်မြုပ်ရုံမျှ လေးငါးကြိမ် ခြောက်ကြိမ် သွင်းချီထုတ်ချီ လုပ်ပြီးမှ လျှောကနဲ အဆုံးထိ တိုင် သွင်းလိုက်ရာ 'KIRA' ခမျာ အင့်ကနဲ တစ်ချက်ညည်းညူရင်း ခါးကော့သွားလေသည်။ ထိပ်ဝထိပြန်ထုတ်လိုက် အဆုံးထိသွင်းလိုက် လုပ်နေရာကနေ ခါးကို သွက်သွက်လှုပ်ရှားကာ ကျွန်တော် အဆက်မပြတ်ဆောင့်မိသောအခါ 'KIRA'ရဲ့ပါးစပ်မှ တိုးငြင်းသော ညည်းသံ လေးတွေထွက်ပေါ်လာသည်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါသည်။ အနည်းငယ်ကြာတော့ လုပ်ရသည်မှာ ချောင်သည်ဟု ခံစားမိ ရသည်။ ချောဆီထည့်တာများသွားလို့လားမသိ။ သူ့ခါးတွေကို လက်ဖြင့်အသာမလျက် လေးဘက်ထောက်အနေအထားဖြစ်အောင် လုပ် ခိုင်းသောအခါတွင် သူကလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကျွန်တော့် -ိင်တံ သူ့ခရေ၀က မကျွတ်စေရဘဲ ထိန်းပြီးကုန်းပေးသည်။
ဒီတော့ကာ သူ့ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းရင်းဆောင့်ချက်ကိုမြှင့်တော့သည်။ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကော့ကော့သွားတဲ့ သူ့ကျောပြင်၊ ဝေ့၀ဲသွားတဲ့ ဆံနွယ်တွေ၊ ညည်းသံတိုးတိုး၊ တစ်ချက်တစ်ချက်၊ ဆုပ်ညှစ်လိုက်သော သူ့ဖင်ကြွက်သားများကြောင့် အတွေ့အကြုံသိပ် မရှိသော ကျွန်တော့်မှာ Climax သို့ရောက်ရှိလာစေတော့သည်ပဲ။ သူ့တင်ပါးတွေကို လက်ဝါးဖြင့် ဖြန်းကနဲ ဖြန်းကနဲ မည်အောင်နှစ်ချက် သုံးချက်ရိုက်လိုက်ကာ အဆက်မပြတ် တရစပ် ဆောင့်ရင်း လူပျို့အားတွေ သူ့ခရေတွင်းထဲအပြည့်ဖြည့်။
သူက ချွေးတွေရွှဲနေသည့် ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးရယ်၊ ပြီးတော့ မျက်နှာရယ် အသေအချာစိုက်ကြည့်ပြီးနောက် 'မင်းက တကယ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကောင်လေးပဲ'ဟု သဘောတကျပြောကာ ပါးပြင်ကို တစ်ချက်ဖျစ်ညှစ်၏။ မွေ့ယာပေါ်အသာလှဲလျောင်းအနားယူတော့ 'KIRA' က ရိုးရာအားဖြည့်ဆေးတစ်ခွက်တိုက်သဖြင့် သောက်ကြည့်လိုက်ရာ တစ်ကိုယ်လုံးပူရှိန်းပြီး နွေးသွားသလို ခံစားရပါသည်။ ကျွန်တော့် မျက်ခွံများလေးလာပြီး အိပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာသည့်အခါ စိတ်ချလက်ချအိပ်ပါ၊ နောက်တစ်နာရီလောက်မှ ပြန်ပြီး ပျော်ကြတာပေါ့ တဲ့ 'KIRA' က။
'၀ါး'...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် နည်းနည်းအိပ်မည်။
ရေတွေအပြည့်ဖြင့်ပြည့်နေသော အခန်းတစ်ခုထဲ ကျွန်တော်လွင့်မျောနေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်ရောက်နေလည်း ဘာလည်းဆို တာမသိ။ ဟိုသည်စီးမျောရင်း ရုတ်တရက် နံရံမှာ မှန်တစ်ချပ်၊ မှန်ထဲမြင်ရသည်က မိန်းမလိုဝတ်ထားသော ကျွန်တော်။ ဘာဖြစ်သွားတာ လည်းဟု လန့်ဖြန့်ကာ မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်မိတော့ ရေစီးထဲမျောပါသွားသလို လွင့်မျောသွားရသည်။
မှိတ်ထားသည့် မျက်လုံးများကိုဖွင့်လိုက်တော့ 'KIRA' ကကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ဖက်ထားရင်း ပြုံးကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရတော့မှ အိပ်ပျော်သွားလိုက်မှန်း ပြန်သတိရမိ၏။ ထူးဆန်းသားပင် အားအင်မကုန်ခန်းသေးပဲ နောက်တစ်ပွဲနွှဲဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေ သည်မှာအမှန်။ သူ့မျက်ဝန်းရီဝေေ၀တွေက ကျွန်တော့်ကိုညှို့နေသည်လား၊ သူ့ကြင်နာမှုတွေက တိမ်းမူးစေသလားမသိ ရင်ခွင်ထဲ နူးညံ့ စွာငြိမ်သက်ရင်း သူ့ဆန္ဒများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်မိသည်။
ပန်းသွေးရောင် သူ့နှုတ်ခမ်းများက ထူအမ်းအမ်းလေးဖြင့် နမ်းချင်စဖွယ်။ မျက်ဝန်းများက ရွှန်းလဲ့ပြီး ညို့နေသည်။ ဟင့်အင်....ငြင်း ဆန်မိချင်သည် သူဘာကိုလုပ်တော့မည်ဆိုတာကို။ ဒါပေမဲ့ ဖီးလ်....အဲဒီဖီးလ်ကရော ဘယ်လိုများလည်း စမ်းသပ်ချင်မိပါသည်။
ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို သူသိသည်...မော့ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းပါးကို နူးညံ့စွာ...ပြီးမှ တက်မက်စွာ သူနမ်းသည်။သူ့လက်ဖ၀ါး နုနုညံ့ဖြင့် ကျွန်တော့်ပေါင်တံ၊ ရင်အုပ်၊လည်တိုင်များကို ပွတ်သပ်ချော့မြူသည်။ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေက ကျွန်တော့်နားရွက်ဖျားဆီ အရောက် လျှာဖျားလေးကိုထုတ်ကာ နားဝက အသီးလေးကို ကလိသည်တွင် ကျွန်တော် တွန့်တွန့်လူး။ ပွတ်သပ်မှုကြောင့် ထောင်ထ နေသော နို့သီးခေါင်းကလေးများကို သူ၏လက်ညှိုးနှင့်လက်မတို့ဖြင့်ညှပ်ကာ တရွရွဖြင့် မသိမသာ ကလိပြီး ဆွဲဆွဲပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ ထိုမှတဖန် နှုတ်ခမ်းများဖြင့် အသာအယာငုံ၍ စို့ပေးလိုက်သေးသည်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ချောဆီကိုစွတ်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တွင်းချဲ့နေလေသည်။
'KIRA' က အဲဒါတွေကို တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နေတော့ ကျွန်တော့်မှာ မရိုးမရွတဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာတော့သည် တစ်ကိုယ်လုံးလေ။ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုလားလာရသည့်ပမာ ပါးစပ်တွင်းမှ တံတွေးများကို တဂွတ်ဂွတ်မြိုနေရသည်သာမက 'ဟင်း....ဟင်း' ဟူသော မပွင့်တပွင့် အသံကလေးများထွက်လာရသည်အထိ ညည်းညူမိလေသည်။ မျက်စိမှိတ်ရင်း မိန့်မူးနေသော ကျွန်တော် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တက်မက်နှစ်သက်သော မျက်လုံးများဖြင့်ပြန်ကြည့်နေသော 'KIRA' ကိုတွေ့ရသည်ပေါ့။ ' အ' ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ပူနွေးမာထောင်နေသော အသားတောင့်တစ်ခုက လာရောက်ပွတ်သပ်ခါ ထိတွေ့လိုက်ပြန်သဖြင့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ကြောက်စိတ်ရွံ့စိတ် ကလေးများရှိနေသော်လည်း 'KIRA'၏ပြုစုမှုက ဘယ်လိုလည်းဆိုတာ သိချင်စိတ်ဖြင့် အသာငြိမ်နေမိတော့သည်။
သူ......'KIRA' က -ီးတံကို ကျွန်တော့်ခရေတွင်းသို့ ထိပ်ဝဒစ်မြုပ်ရုံမျှ အသာအယာပင် နှုတ်ခမ်းသားလေးများ အဆင်ပြေချောမွေ့လာ သည်အထိ ခပ်ဖြေးဖြေးလေး သွင်းလိုက်ပြန်ချွတ်လိုက် လုပ်နေလေသည်။
ဤကဲ့သို့ ဒစ်မြုပ်ရုံမျှ လေးငါးကြိမ် ခြောက်ကြိမ်သွင်းချီထုတ်ချီလုပ်ပေးပြီးမှ တဖန်ဆက်လက်၍ ဖိအားပေးပြီးသွင်းလိုက်ရာ ကျွန်တော့်မှာ 'အင့်...အား...အ' ဟူသော အသံထွက်လာရပြီး ကိုယ်ပေါ်သို့ခွ၍ထောက်ထားသော 'KIRA' ၏ လက်မောင်းများကို တစ်ဖက်စီ အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါတော့သည်။ ခါးအောက်မှာ ခုထားသော ခေါင်းအုံးအမြင့်ကြောင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးများမြောက်နေကာ အဆင်ပြေပြေ အောက်က နေနိုင်လေသည်။ ဗိုက်ထဲတစ်မျိုးပဲ....၀မ်းသွားချင်သလိုလို ဟိုဟာဖြစ်ချင်သလိုလို အီလည်လည်နဲ့။ အတွေ့အကြုံမရှိ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို 'KIRA' က သိဟန်တူပြီး ကြပ်သိပ်မှုကို သဘောကျနေဟန်တူသည်။ -ီးတံတစ်ဝက်မျှသွင်းပြီး သွင်းလိုက်နှုတ်လိုက် ဖြင့် လုပ်နေရာမှ 'KIRA' မှာ တဖြေးဖြေး နှင့်သွက်လာပြီး နောက်ဆုံးတွင် -ီးတံအဆုံးဝင်သွားအောင် တထစ်ချင်းဖိ၍ဖိ၍ သွင်းလိုက်လေ သည်။ 'KIRA' ဖိသွင်းလိုက်သည့်အခါတွင် ကျွန်တော့်မှာ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲဖြစ်သွားရပြီး သူဟာကြီးကြောင့် နာကျင်သွားရသလို ပြောမပြ တတ်သည့် အထိအတွေ့အရသာ ခံစားမှုများကလည်း ပြိုင်တူလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာရသဖြင့် အံကလေးကိုကြိတ်၍ ကြိတ်၍ မှိတ်ခံနေလိုက်ပါ တော့သည်။
သူ့ဆောင့်ချက်များကြောင့် တစ်ခါတစ်ခါ လန့်ပြီးညှစ်ပြုမိသည့် ဖင်ကြွက်သားများကို သူသဘောကျနေသည်။ တစ်ချက်ခြင်းဆောင့် လိုးနေရာကနေ အရှိမြှင့်ကာ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်တော့သည်။ အဆုံးထိဝင်သွားလိုက် ထွက်လာလိုက်ဖြင့် ရှိနေရာက ရုတ်တရက် ဖိသွင်းလိုက်သောအခါဝယ် ထွားလှသော-ီးတံကြီးအရင်းထိဝင်သွားသည်မို 'အား..ကျွတ်ကျွတ်'ဟု အသံထွက်အောင် ငြီးငြူရင်းမှ ၏ရင်ဘတ်ကို ကျွန်တော်က လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆီး၍ တွန်းထားလိုက်မိရသည်။
အတွေ့အကြုံမရှိ ချောဆီကြောင့် အဆင်ပြေနေပေမယ့် နည်းနည်းပြဲသွားလောက်ပြီထင်ရဲ့။ နာကျင်မှုထက် အရသာက ပိုမိုလွန်ကဲလာ သည်မို့ 'KIRA' ကို ဆက်လက်၍ -ိုးပေးရန် ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလိုက်သည်တွင် 'KIRA' မှာ ဘယ်လိုမှ ဆုတ်ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ အဆုံးစွန် သော စခန်းသို့ရောက်အောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေးရင်းနှင့် -ိုးလိုက်သောကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ဘယ်ညာလူးလိမ့်ရင်း 'တအင်းအင်း .... တဟင်းဟင်း' ဖြင့်ငြီးငြူရင်း 'KIRA'၏ကျယ်ပြန့်သော ကျောပြင်ကြီးကို သိုင်းဖက်၍ အလိုက်သင့်မျောနေမိသည်။ ကျွန်တော့်ကို ခွကာ အားရပါးရ -ိုးနေသော 'KIRA' ၏ ဆောင့်ချက်များမှာ သွက်သထက်သွက်လာပြီးနောက် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကာ အဆုံးထိ တစ်ချက် ဖိသွင်းရင်း ငြိမ်ကျသွားလေသည်။
နှစ်ဦးသား အိပ်ယာပေါ်အတူလှဲလျောင်းအနားယူကြပြီးနောက် ခဏအကြာမှာ သူ လူးလဲထပြီး ရေချိုးခန်းဆီထွက်သွားသည်ကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကျန်နေခဲ့သည့် သုံးပြီးသွားသော ကွန်ဒွန်များကို အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာသွားထည့်ပြီးနောက် ခဏအိပ်ယာပေါ်ဆက်လှဲနေ လိုက်ကာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့လည်း တဘက်ကြီးတစ်ထည်ခါးမှာပတ်ကာ သူ့နောက်လိုက်သွားဖြစ်ခဲ့သည်။
ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ဖိတ်ခေါ်သံကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားလိုက်သည့်နောက်မှာ 'KIRA' တစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီး ကြီးဖြင့် ရေပန်းအောက်တွင် ရေချိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကိုလည်း ဆပ်ပြာဖြင့်ပွတ်တိုက်ဆေးကြောနေ သည်မှာ မွှေးကြိုင်လို့ပါ။
ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့် ကြည့်နေမိရင်း ရေပန်းအောက်ကို ကျွန်တော်လည်း ၀င်လိုက်ပါသည်။ အေးမြသောရေကြောင့် ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ စောစောက ပင်ပန်းထားခဲ့သမျှ လန်းဆန်းသွားပါသည်။ ထိုထက်ပိုသည်က 'KIRA' မှာ မွှေးကြိုင်သော အမြှုပ်များသော ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် ကျွန်တော်၏ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ဆေးကြောပေးသည်မှာ အထူးကျေနပ်ဖွယ်ပင်။ သူ့လက်များဟာ ပွတ်သပ်ရုံ မဟုတ် ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့် ချောမွတ်နေသော ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးကို လည်တိုင်၊ကျောပြင်၊ရင်အုပ်၊ပေါင်များပါမကျန် အကြောကိုချက် ကျလက်ကျထိအောင် နှိပ်နယ်ပေးတော့သည်။ သူ့ပြုစုမှုများက တာဝန်ကျေမဟုတ်မှန်း သိလာရသည်။
'ကောင်လေး....မင်း ဂျပန်က မပြန်ခင် ကိုယ်တို့အပြင်မှာတွေ့ရအောင်လား? ဒီကိုမလာပါနဲ့တော့
ပြတင်းကမြင်နေရသော မီးရောင်စုံဖြင့် လှနေသော မြို့ကြီးကို ကျွန်တော်ခဏငေးမောမိပြီးနောက် ဆက်မငေးမိတော့ဘဲ အိပ်စက်ဖို့ စဉ်းစားမိလိုက်သည်။ ညဉ့်အတော်နက်ပြီ မဟုတ်ပါလား။ 'KIRA' ကတော့ မွှေ့ယာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းရင်း ကျွန်တော့်ကို ပြုံ့းကြည့် နေသည်။ နှစ်သက်တာလား ကြိုက်သွားတာလားမသိသော အာသာဆန္ဒပြည့်ဝသည်ဟု ခံစားရသွားမိသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသည်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဘာမှမတွေးချင်ပါ။ လက်ကမ်းကြိုနေသော 'KIRA' ရဲ့ ရင်ခွင်နွေးနွေးထဲ ကျွန်တော် ဒီညအိပ်စက်တော့မည်။ လာမည့် မနက်ခင်းများဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေသော လာခြင်းကောင်းသော အရာများ သယ်ဆောင်လာမည်ဟု မျှော်လင့်မိသည်လေ။
မွှေးမြသော ကိုယ်သင်းနံ့လေးရှိထဲရင်ခွင်ထဲ နွေးထွေးလုံခြုံစွာ....ပြီးတော့ နှစ်လိုစွာ ကျွန်တော် လှဲလျောင်းလိုက်သည်... ဒါကျွန်တော့်အတွက် သင့်တော်သည်ထင်ပါရဲ့...
Alex aung (4 June 2010)
Posted by Alex Aung at 8:07 PM
Straight Next Door Neighbor (Ending)
Straight Next Door Neighbor Part I
အားလုံးဟာ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တန်းတူညီတူ ဆက်ဆံနို...